Shiinaha Khadka mashiinka buuxinta saliida Muhiimka ah iyo alaab-qeybiyeyaasha | Higee
Khadka mashiinka buuxinta wuxuu si ballaaran ugu habboon yahay buuxinta dhalada yar iyo xiritaanka, oo laga sameeyay SUS304 birta birta ah ama SUS316 birta ka hortagga-daxalka ah ee qaybta la xiriirta walxaha, oo loo hoggaansamo heerka GMP.
Khadka Tooska ah ee Mashiinka Calaamadeynta Mashiinka Buuxinta
1.Qadka Mashiinka Buuxinta Saliida Aasaasiga ah
Mashiinkaan waxaa loo codsadaa 15ml- 50ml saliid xiritaanka buuxinta iyo khadka calaamadeynta ee caagagga ama dhalooyinka quraaradaha
Mashiinka ayaa loo habeyn karaa in lagu dhammaystiro miiska miiska, dhowr madax buuxiya + nidaamka xiritaanka (quudiyaha quudiyaha + xirashada + quudiyaha daboolka + capper), mashiinka calaamadeynta iyo miiska miiska loo soo uruuriyo.
Waxaa jira farsamooyin farsamo oo sax ah oo sare oo lagu bixiyo qalliin qalin lagu qoro si loo helo daboolka ， dardar-gelinta gudbinta kaameradda oo madaxa kor u qaadeysa; xiritaanka joogtada ah, qiyaasta mashiinka mashiinka iyo buuxinta; taabashada shaashadda taabashada, dhalo aan wax buuxin lahayn, daboolin gudaha iyo dibedda, iyada oo laga faa'iideysanayo gudbinta deggan, goobta saxda ah, qiyaasta saxda ah, hawlgalka habboon iwm.
● Qalabku wuxuu qaataa afar-saf oo laba-saf ah oo bistoolad isku dhejinaya si uu u buuxiyo, ka dibna waxaa loogu diraa garaacida meelaynta suunka wax lagu raro, daboolkuna waa loo rogaa si isdaba-joog ah si uu u galo saldhigga daboolka si otomaatig ah loogu daboolo daboolka; daboolka laba-madaxa leh ayaa loo adeegsadaa wax lagu shaabadeeyo daboolkuna waa afar haad. Double-mindi ayaa ku duuban geesaha iyadoo leh dun laba-fur ah.
System Nidaamkan buuxinta wuxuu si ballaaran ugu habboon yahay buuxinta dhalada yar iyo xiritaanka, oo laga sameeyay SUS304 ahama iyo SUS316 birta ka hortagga-daxalka ah ee qaybta la xiriirta walxaha, oo loo hoggaansamo heerka GMP.
Hore: Khadka mashiinka xoqida
Xiga: Khadka Mashiinka Buuxinta Malabka
Mashiinka buuxinta saliida lagama maarmaanka ah